I-MRI iyindlela ephumelelayo yokuphulukisa, okukuvumela ukuba uhlole ngokuningiliziwe ushintsho lwezifo kanye nesakhiwo samathanga aphansi womzimba, amathambo, i-ligaments kanye nemisipha. Umphumela wama-amacala amaningi ulungele kungakapheli ihora ngemva kokuhlolwa, okwenza kube lula ukuthi ungalibali ukuhlolwa nokukhetha izindlela zokwelapha.
Kodwa, ngeshwa, akubona bonke abantu abangafeza i-MRI. Ukuqhathaniswa nokulinganiselwa kulolu cwaningo kuhlobene kakhulu nokuba khona kwensimbi emzimbeni nasezifo ezithile. Isisindo somzimba esingaphezu kuka-120 kg singabuye sibe yisithiyo kule nqubo, nakuba kunamathemikhali athile avumela iziguli ezinesisindo esingaphezu kuka-180 kg ukuthi zitholakale.
Ukuphikisana ngokuphelele kuzo zonke izinhlobo ze-MRI
Kunezimo ezingavumelani neMRI. Ukuqhathaniswa kwaleli qembu akukhipha ngokuphelele ukuthi kungenzeka ukwenza le nqubo yokuxilonga. Ucwaningo olwenziwe alukwazi ukuqhutshwa kubantu abanezintambo ezivuthiwe, ngoba insimu yamagnetic iholela ekuphazamiseni ekusebenzeni kwale divayisi. Ngenxa yezinkhukhu eziphukile, isigqi senhliziyo singase siphume, futhi ingozi enkulu (kuze kube umphumela obulalayo) izosongela impilo yomuntu.
Ungenzi i-MRI kulabo abagulayo abanamakhemikhali abenza izinto ezibonakalayo emzimbeni wabo, ngoba bangashisa kakhulu futhi baqede ngesikhathi sokusebenza. Uma umuntu emzimbeni anezithombe zokudweba okwakusetshenziswa ngayo upende olunamathele afanayo - naye uvinjelwe ukwenza le nqubo yokuxilonga.
Ukuphikisana okuhlobene no-MRI
Kunezimo eziningi lapho iziguli ezingakwazi khona ukwenza i-MRI njalo. Ukungafani kwaleli qembu kuhlobene, ngakho-ke, uma izimo ezithile zihlangene, umuntu angakwazi ukuthola lolu cwaningo. Lokhu kufaka:
Ukwesaba isikhala esivaliwe;
Ukuhluleka kwenhliziyo engapheli;
Ukuhluleka ukuhlala endaweni enokuthula isikhathi eside ngaphandle kokuhamba ngesikhathi esisodwa.
Imiqhele yensimbi ye-ceramic ezimweni eziningi zenziwe ngezinto ezinjalo ezingenzi magnetize, ngakho ukuba khona kwabo emzimbeni akuyona into evimbela i-MRI. Okufanayo kuya ku-intrauterine spirals kanye nezimpande ze-titanium zanoma yikuphi indawo yangakini. Ukungahambisani nokugula kwengqondo kunganakwa uma isiguli sibhekene nesilwane futhi silawulwa udokotela.
I-MRI ngokuphambene: ukuphikisana nenqubo
Ukuze kuthuthukiswe izindawo ezihlukene zezithombe, i-MRI ne-agent ehlukile iqhutshwa ngezinye izikhathi. Ukutadisha okunjalo kuphumelela ukuxilongwa ngokuhlukana kwezilambu kanye nokutholakala kwezingubo zomzimba ezincane kakhulu. Ngaphezu kokuphikisana okujwayelekile, i-MRI ngokuphambene ayenzwanga kulezi zimo nezifo:
Ukusabela okweqile kumuthi ukuthuthukisa isithombe;
Ukukhulelwa nokukhwabanisa (ukutadisha ngokuphambene - lokhu kuyi-contraindication ngokuphelele);
Izifo ezinzima ezingapheli ezintsheni;
Kamuva kwenziwe ukufakelwa kwesibindi.
Izivimbelo ekukhulelwe nasekunceliseni
Ngesikhathi se-MRI, umzimba womuntu awutholi imisebe (njengokwesibonelo, i-X-ray noma i-CT), kodwa isengozini yesenzo semandla amakhulu. Ngaphezu kwalokho, ezigulini eziningi, ukuhlala isikhathi eside esivumelwaneni esiseduze kuhambisana nokungaqondakali kwengqondo. Njengoba abesifazane abakhulelwe akufanele bavezwe ekucindezelekeni, lolu cwaningo alukhuthazwa ukuba luqhutshwe ku-trimester yokuqala, lapho zonke izitho zomntwana ezifakiwe zenziwa kuphela.
Ukuhamba kwe-MRI ku-2 no-3rd trimester kungenzeka kuphela ezinkomba eziqinile. Lesi sinqumo kufanele senziwe ngudokotela oya khona, ngokulinganisa inzuzo yokuxilonga kanye nengozi. Abesifazane besimweni kanye nomama abahlengikazi abakwazi ukufaka umehluko kuMRI. Ukungahambisani nalokhu kubangelwa ukuthi lesi sidakamizwa singathinta kakhulu ukuthuthukiswa kwe-intrauterine yengane noma ukungena emzimbeni wengane ngesikhathi sokuncelisa.
I-MRI yomgogodla: ukuphikisana kokucwaninga
Ukuze uhlolisise i-hernias, i-osteochondrosis nezinye izinguquko ezishintshashintshayo-eziguqukayo, udinga ukuhlola umgogodla. Ukuze ahlukanise lezi zimo kusuka ku-sciatica nokuvuvukala kwe-radiculitis, isiguli ngokuvamile sibekwe i-MRI yesifunda se-lumbar. Ukungahambisani nale nqubo kufana nokulinganiselwa okujwayelekile kwazo zonke izinhlobo zalolu cwaningo. Kodwa kunamanye amaphuzu athile ahlotshaniswa nendawo yendawo yokuhlola.
Akunakwenzeka ukufeza i-MRI ngemuva ngemuva kwezimo ezinjalo:
Isiguli sithole umfutho wokugulisa umgogodla ophuthumayo, okudinga ukungenelela okuphuthumayo (MRI kwenziwa imizuzu engaba ngu-10-15, futhi ngezinye izikhathi ukulibaziseka okunjalo kungasongela ukuphila);
Isiguli asikwazi ukulala ngokuthula emhlane ngenxa yesifo esibuhlungu esibuhlungu, esingavunyelwe yi-anesthetics.
I-MRI yomgogodla, njenganoma yimuphi omunye indawo, ayikwazi ukwenziwa uma izingcezu zempahla engaziwa zihlanganiswe emzimbeni womuntu.
Umtholampilo Makhanova Sifundazwe. Services, amanani kanye nokubuyekezwa
Indlela yokuhambisa ama-huski kalula kalula futhi ngokushesha
Indlela ukulungiselela congratulation ku wakhe 70 lokuzalwa indoda